5 Ntak ihe mere SEO dị ogologo oge ji dị mma karịa SEO Proven By Semalt
Nchọpụta Nyocha Search ma ọ bụ SEO bụ usoro ejiụlọ ọrụ dị iche iche maka ịntanetị ahịa. Mana ọ naghị adịrị ndị ahịa mfe ịhụ nnukwu foto mgbe ọ na-abịa itinye n'ọrụngwa ngwa ahia ahia nke igwe na ngwa ngwa ka otutu n'ime ha choro ihu ugbua obula na uzo ndi ozo n'adata ha.Nke a na-eme ka ndị ahịa ahịa dijitalụ lekwasị anya na obere oge SEO iji nweta ọkwa dị elu na Search Engines Results Pages (SERPS). Otú ọ dị,nke a abughi ụzọ isi kwadoro ntanetị ntaneti maka azụmahịa gị. Obere oge SEO na-arụ ọrụ ruo oge ụfọdụilekwasị anya na SEO ogologo oge na-enyere gị aka ịme atụmatụ ịba uru.
Michael Brown, Onye Ahịa Nlekọta Ọrụ nke Mkpụrụ akwa DigitalỌrụ, na-enye ihe ise mere ogologo oge SEO atụmatụ ji aba uru azụmahịa.
Algorithms Search Engine agbanwe agbanwe mgbe niile
Ngbanwe niile nke search engine algorithmsGoogle mepụtara na-emetuta mkparịta ụka na-ekpo ọkụ n'ahịa ahịa. Ihe gbasara Google iji nye ndị ọrụ na-enweghị spam-freeihe onwunwe weebụ ma ọtụtụ weebụsaịtị na-eche mmetụta mgbanwe ndị a dị na ya site n'inweta ogo ma ọ bụ nkwụsị nke onlinevisibiliti. Enweghị mmụba na-aga n'ihu na SEO ụlọ ọrụ na-eme ọ gaghị ekwe omume ịgidesi ike na mgbanwe ndị ahụ.Ị kwesịrị ịnọ na nchekwa site na mmelite n'ọdịnihu site na ijide n'aka na saịtị gị bụ engine engine kwesịrị..
Ezi SEO dabeere na Ọganihu Ọhụrụ
Mgbanwe nke algorithm nke search engine na-ebuli elumkpa mmelite ọ bụla, nke bụ isi ihe na-enyere gị aka ịnọgide na-enwe SEO dị mma. N'ezie, ọdịnaya ọhụrụ dị mkpaọrụ na dijitalụ ahịa, ịghọ akụkụ nke gị ogologo oge SEO atụmatụ. Onyinye maka ihe ịga nke ọma nke ahia ịntanetịMgbasa ozi siri ike ịkọ.
Mobile Internet ọrụ
Ebe nrụọrụ weebụ Ịntanetị nọ na-enwe mmetụta dị ịrịba amaeto eto n'ime afọ ole na ole gara aga, taa ihe karịrị ọkara nke ịntanetị na-abịa site na ngwaọrụ mkpanaaka. Mobile SEO bụ nke ọzọihe a na-apụghị ịkepụ iche nke atụmatụ SEO ogologo oge, nke na-eme ka ndị ọrụ ịntanetị nwee ike ịnweta ọdịnaya site na ngwaọrụ mkpanaka. Imeebe nrụọrụ weebụ na-anabata ihe ọ bụla ihuenyo nke onye ọrụ ahụ nwere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịmepụta ọdịnaya nke na-arụ ọrụ nke ọma na-emeghachi omumena nhazi.
Ịmepụta aha njirimara backlink bụ okwu bụ isiGoogle nhazi ogo algorithm. Otú ọ dị, nyocha akọwapụtara na-agbanwe agbanwe. Ya mere, okwu mkpirikpi SEO nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụnjikọ ụlọ ọrụ, nke pụtara igosi njikọ gị enweghị usoro. Site n'iji njikọ njikọ na usoro SEO ogologo oge gị, ị ga-ezereNtube Google ma mepụta atụmatụ dị elu maka ọdịnihu.
Mkparịta ụka Kasị Elu
Ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke SEO bụ itinye ebe nrụọrụ weebụ na ibe gịna ọkwa kachasị elu nke nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nweta ha na peeji mbụ, ma ọ bụ ka mma, na-apụta na snippets Google. Weebụndị ahịa na-eji ụzọ dịgasị iche iche eme ihe iji nweta ọnọdụ kachasị elu na nsonaazụ ọchụchọ n'ihi na ebe a ka ọtụtụ okporo ụzọ si abịa. Nke kacha mmaụzọ iji nweta ebe ahụ iji usoro SEO dị ogologo oge dị ogologo Source .